Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ampiasaina ankehitriny mba hangataka fanambarana amin'ny mpanjifa amin'ny mpisolovava? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 June 2019	• 6 Comments
Androany dia fivoriana iray vaovao manerana an'i Jos Brech ao amin'ny raharaha Nicky Verstappen (jereo Telegraph). Jos Brech, izay antsoina hoe Jos B. ao amin'ny media ary tsy hita intsony amin'ny sary fa amin'ny alalan'ny sary. Ny tranga dia manomboka amin'ny filazana fa maty tamin'ny loza goavana ny mpandrindra ny fitsarana. Dia manontany tena avy hatrany ianao raha manelingelina ny olona noho ny feon'ny fieritreretany rehefa hitany fa miasa amin'ny PsyOp (asa ara-psikolojika) izy, te hiresaka, ka tsy maintsy nodiovina? Tsy ho afaka hanaporofo izany mihitsy isika. Tidy dia madio.
Ny azonao ambara dia ny fametrahana ny fifantohan-dry zareo amin'ny tranga amin'ny adihevitra momba ny ADN. Izany dia tampoka momba ny fomba fiasan'ny Bayesiana amin'ny fikajiana ny mety hiseho fa tsy ny maha-tsotra ny zava-misy ara-dalàna hoe nampiasaina tamin'ny tranga "tranga famonoana" ny ADN, izay tsy tranga famonoan'olona, ​​satria tsy voaporofo ny vono olona. Mbola tsy avelan'ny lalàna hampiasa ny ADN momba ny tranga A ianao raha ny zava-misy. Ny zava-misy amin'i Gerald Roethof indray dia tsy miaro azy io fa mbola misy ihany koa fa misy ifandraisany amin'ny raharaha PsyOp eto. Afaka manafoana ny toeran'i Jos B. avy hatrany izany.
Voarakitra indray koa ny adihevitra manoloana ny fanararaotana ara-nofo na tsia:
Ny mpisolovava Gerald Roethof dia nanonona ny tatitra nataon'ny mpitsabo aretin-tena Rob Bilo ary nanambara fa ny ratra amin'ny anus Nicky dia tsy midika fa ny fanararaotana ny zaza dia hoe: "Mety ho vokatry ny harefo mafy izany na ny fampiasana sarotra."
Ny fikarohana ara-psikolojika ihany koa dia mampiseho fa ny Job B. dia fametavetana, ary izany dia mitana anjara toerana fanampiny ao an-tsain'ny olona miaraka amin'ny hevitra hoe i Jos B. no tokony ho tompon'andraikitra, ka tsy misy manontany raha Mety hiady amin'ny fiasan'ny saina (PsyOp) isika mba hampidirana lalàna vaovao.
Ny mpampanoa lalàna dia mamaly ny fanatsoahan-kevitr'i Roethof fa ny mpahay ho an'ny PBC dia mihevitra an'i Jos B. "lehilahy tsotra". "Fantatr'izy ireo koa ny aretina, izany hoe pedofilia." #Nicky
- Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) Jona 5 2019
Mazava fa tsy misy porofo manamarina ny famonoana olona na ny fanararaotana ara-piraisana ara-nofo, ka ny ADN (Mpilalao PsyOp?) Jos B., izay nahazo ny (Missed?) Missing, dia tsy tokony nampiasaina tao amin'ny (tsy misy) raharaha famonoan'olona Nicky Verstappen. Na izany aza, amin'ny fihainoana indray ny fihetseham-pon'ireo olona mijery, dia navotsotra ny sain'ity hetsika tsy ara-dalàna ity. Raha ny marina, ny fitsarana dia manohana ny lalàna vaovao (amin'ny fanekena ny fampiasana ny ADN) amin'ny lalàna vaovao. Ny zavatra tsotra izay tsy nolazain'i Gerald Roethof dia mahatonga azy ho mpisolovava tsy mino (PsyOp).
Saingy toy ny zavatra maro, ny tranga PsyOp dia ampiasaina amin'ny tanjona marobe. Amin'ity tranga ity, Jos Brech koa dia nanao fanambarana tamin'ny mpisolovava azy. Mazava ho azy fa ny sehatra rehetra ho an'ny sehatra PsyOp, satria mazava ho azy fa ny fanitsiana lalàna maro araka izay azo atao, ka ilaina ny hikarakara ny tolo-dalàna izay tianao hotovana.
Ao amin'ny raharaha Thijs H. Efa hitanay izao fa ny tsiambaratelo ara-pitsaboana amin'ny sehatry ny GGZ dia tsy maintsy averina indray mandeha indray, satria raha tsy izany dia tsy azo ampiasaina ny sary fakantsary sy ny fanambaran'ireo mpiasa. Ao amin'ny tranga Jos B. no ilainy ny fanambarana avy amin'i Jos B. ao amin'ny mpisolovava azy (PsyOp) Gerald Roethof. Ary noho izany dia mihena tsikelikely ny zon'ny olom-pirenena tsirairay (jereo eto). Na izany aza, satria mitranga amin'ny tranga famonoana goavana, mihatsaravelatsihy amin'ny media, manaiky an-tsitrapo izany ny vahoaka. Tsy misy mahatsikaritra fa mety hisy fiantraikany amin'ny olom-pirenena rehetra ny fanovana natao tamin'ny lalàna, noho izany dia tsy misy olona mahavita azy. Ny vehivavy sy ny raim-pianakaviana ao amin'ny akanjo dia efa voaofina hihazona ny vavany, satria efa nianiana tamin'ny satroboninahitra izy ireo ary raha nampiditra lalàna vaovao tamin'ny alàlan'ny PsyOp ny satro-boninahitra, dia hiara-hiasa na hangina izy ireo.
Tags: B., Brech, mpandrindra, zava-dehibe, Featured, forensically, Gerald, Hof, Js, ny rariny, Nicky, loza, maty, DA, fitsarana, hetsika, fitoriana, Roethof, Verstappen
5 June 2019 ao amin'ny 15: 07
Raha vao nosamborina i Jos B, dia nilaza i Gerald Roethof indray mandeha fa nalaina tsy ara-dalàna ny ADN, saingy tsy niteny mangina izy. Angamba mety ho voavonjy, satria raha ny marina dia mpisolovava iray ihany no manizingizina amin'izany.
Azo inoana fa izy no nampianarina hanao izay tiany hatao raha zavatra tena izy. Natao izany mba hahatonga ilay raharaha hijery araka izay azo atao.
Satria tsy rariny izao raharaha izao, resy lahatra aho fa izany. Raiso ny zava-misy fa tsy voamarikao ny tena mety ho an'ny olona maro, raha jerena ny boky 'The Death of Mysterious Nicky Verstappen' dia nanambara fa ny mpitarika ny lasy Joos Barten dia nahafantatra ny toerana misy an'i Nicky. Ary misy marika maromaro kokoa amin'izany, fa farafaharatsiny izy no nandray anjara tamin'ny fanampiana tamin'ity tranga ity.
Heveriko fa ny fikasana dia ny hanamelohana an'i Jos B, mba hahafahan'ny fiadanana ao Heibloem hiverina. Saingy amin'ny fanaraha-maso akaiky dia miteraka fahasahiranana izany. Satria ahoana no ahafahan'ny tantara iray lojika noforonina miaraka amin'i Jos B ho ilay hany olona nahavanon-doza? Anisan'izany ny zava-misy rehetra fantatra, toy ny hoe nandeha bisikileta teo amin'ny heath izy taorian'ilay fahitana an'i Nicky.
Miahiahy aho fa tsy nanao ditra mihitsy izy. Noforonina izy io ka tsy maintsy nanome ny ADN azy tamin'ny herintaona. Raha tsy nandeha bisikileta tany izy dia tsy ho tonga tao amin'ilay sary. Ny polisy miaramila maty tany Iràka ary voalaza fa nosamboriny dia tsy ho afaka hamaly ity fanambarana ity.
Ny zavatra tena manan-danja indrindra dia raha handà an'i B i Jos sy hilaza fa tsy fantany ny fomba nandraisan'ny ADN azy. Avy eo dia tsy azo sazina izy, satria tsy ampy ny porofo. Nefa hitantsika fa mihazona ilay raharaha izy. Mety hiasa amin'ny tantara mampihetsi-po ao ambadiky ny sehatra izy ireo ary mbola tsy feno izany - ary tena mahaliana aho raha ho tanteraka izany. Ary eny, tsy ekeko ny mety hitranga fa efa mpandova ara-dalàna izao no maty. Ny maha-olombelona dia indrisy fa marary.
5 June 2019 ao amin'ny 15: 39
Fotoana iray ankoatra ny ambangovangony amin'ny tantarao, tiako hojerena raha nilaza izany i Roethof. Tsy afaka mahatsiaro na mahita tafa sy dinika iray aho raha nandre azy niteny izany. Ny zava-misy izay tsy manindry azy amin'izany dia toa mahatonga azy ho mpisolovava psyop.
5 June 2019 ao amin'ny 17: 53
Tsaroako nandritra ny dinidinika fohy teny an-dàlambe taorian'ny nisamborana an'i Jos. Tsy fantatro intsony hoe aiza no misy ary tsy hisy intsony ao amin'ny Internet. Saingy tsaroako izany satria efa nanontany tena aho raha toa ka tsy nahazoan'ny ADN ny ADN. Rehefa nilaza izany ny mpisolovava iray, dia nieritreritra aho hoe ahoana no handehanan'io hevitra io. Fantatray fa hatramin'izao, mbola tsy naheno izany intsony.
5 June 2019 ao amin'ny 18: 33
Ny antsasaky ny mpisolovava dia miasa / mivantana amin'ny governemanta. Ny antsasany kosa tsy manao izany ary matahotra ny Dean, izay mijery ny mpisolovava amin'ny anaran'ny 'fanjakana', ary mijery ny vondrona voalohany. Matahotra ny tsy hanaisotra ny mpisolovavan'ny tarika voalohany. Izany no mahatonga azy ireo tsy manao ny tsara indrindra vitany.
Ireo mpisolovava ao amin'ny tarika voalohany dia manana fifandraisana amam-panahin'ny mpitsara sy ny Bar Association. Hahazoana fahafinaretana kokoa raha mahita mpisolovava toy izany ianao. Tsy tokony hanana fifandirana ara-dalàna ianao momba ny toetoetry ny tovolahy ao amin'ny script. Avy eo dia tsy handray ny raharaha izy ireo na hanaparitaka ny raharaha.
5 June 2019 ao amin'ny 23: 01
Ny gazety Trouw dia namoaka ihany koa ny lahatsora-peo 'ADN afa-tsy toko iray amin'ny antontan-taratasin'ny heloka bevava' farany tamin'ny 28 August. Hoy i Ton Broeders, mpampianatra momba ny heloka bevava ao amin'ny Oniversiten'i Leiden: "Mahagaga fa nahazo ADN ilay olona ahiana satria tsy hita izy. Tokony ho tahiry roa samihafa: ireo olona ahiahiana sy ireo olona tsy hita. "Araka ny tatitra nataon'ny Ministeran'ny Fampanoavana araka ny fitsipika, ny mpisolovava B. dia afaka miady hevitra amin'ny fanilihana ny porofo.
Mahagaga àry fa tsy mampiasa izany i Roethof amin'ny fiarovana. Etsy ankilan'izany, ity lahatsoratra ity dia toa nanjavona tao amin'ny tranokalan'ny Trouw, saingy mbola hitako foana izany http://www.topics.nl.
6 June 2019 ao amin'ny 22: 53
Noho izany dia mitazona fehezan-dalàna an-tsoratra 'toy ny vola' i Jos, araka ny nolazain'i Pauw omaly. Tsy te hanambara ny teniny izy, satria ny zavatra rehetra dia ampiasaina aminy, hoy izy. Maninona izy no mieritreritra fa ity fanambarana ity dia tombontsoa iray taty aoriana fa tsy tampoka amiko.
Ity lohataona ity dia nanana fifanakalozan-kevitra tamin'ny olona iray tao amin'ny media sosialy izay nanambara fa nihosin-koditra tamin'ny fiakaran'ny zaza i Jos sy i Nicky. Izany no nahatonga ny ADN tao amin'ny tontolon'i Nicky. Nilaza ihany koa io olona io fa naheno izany avy amin'ny media. Fahadisoana angamba, satria tsy nahita na inona na inona momba izany aho. Ny andro manaraka dia namafa ny valiny io olona io. Ho avy angamba i Jos.
« Efa tsy hita intsony i Anja Schaap, PsyOp? Jereo ny antony (video)
Mitady fatratra ny mpikaroka ao amin'ny PBS, avy any Den Kolder »
Total visits: 12.174.907
Caesar Lion Cachet op Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra!
ZalmInBlik op Afaka mamorona ny korontana any Eropa izay hanangana ny fanjakana Ottoman ve i Boris Johnson (razamben'i Ottoman)?
mari-toerana op Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra!
Mifandraisa anjara amin'ny 1.633 hafa